Ciyaarta dhexmartay Congo iyo DR Congo - BBC News Somali
Ciyaarta dhexmartay Congo iyo DR Congo
Ciyaartii dhexmartay labada kooxood ee dariska ah ee Congo iyo DR Congo ayaa ku bilaabatay si aan xamaasad lahayn oo ciyaarta waxa ay ku bilaabatay si tartiib ah oo marka hore oo dhanba waxaa la islahaa kooxahan waxba iska dhalin maayaan, inkastoo ay mararka qaar kubada qurxoon isdhaafsanayeen.
Qeybtii horana iyadoon wax badan la qaban ayey ku dhamaatay 0-0 oo sidaa ayey ku kala nasteen.
Markii la isugu laabtay qeybtii dambe ee ciyaarta macalinkastana uu kooxdiisa wax u soo sheegay ayaa waxay kooxuhu bilaabeen inay wax ka badalaan habkii ay u dheelayeen. Ciyaartiina waxa ay mar qura isu badashay wax la yaab leh oo aadanba indhaha ka jeedin karin. Ciyaartoyda kooxda Congo Brazzaville ayaa horay ka fuliyay ballantii ay soo qaadeen oo laba gool oo degdeg ah ayey muddo kooban ku dhaliyeen.
Hasayeeshee taas waxay fariin wanaagsan u aheyd ciyaartoyda kooxda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo oo jiifka intey ka kaceen waxaan la arag oon la maqal ku sameeyeen kooxda ay dariska yihiin ee Congo, oo ciyaar ciyaar dhaaftay ayaa waxaa soo bandhigay ciyaaryahanada Mbokani, Bokila iyo Kimuaki oo weerrar saddex geesood ah ku burburiyay kooxdii Congo.
Koongana waxa ay u qalantay inay intaa in ka badan ka dhalisaba kooxda ay dariska yihiin, waxa ayna nus dhammaadka ka hortegi doontaa kooxdii ka soo baxda ciyaarta maanta ee Aljeeriya iyo Ivory Coast.